ဓာတုဗေဒ ပညာရပ်သည် ဒြပ်ဝတ္တုတို့၏ ပါဝင်ပေါင်းစပ်ပုံ၊ ပုံသဏ္ဌာ
ⓘ ဓာတုဗေဒ ပညာရပ်သည် ဒြပ်ဝတ္တုတို့၏ ပါဝင်ပေါင်းစပ်ပုံ၊ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ဂုဏ်သတ္တိ များနှင့်အတူ ဓာတု ဓာတ်ပြုခြင်း ဖြစ်သောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို လေ့ ..
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်သည်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်ပုံသေနည်း H2O2ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သန့်စင်သော အခြေအနတွင် အပြာနုရောင်အရည်ဖြစ်သည်။ ရေထက် အနည်းငယ်ပို၍ ပျစ်သည်။ ၎င်းကိုဓာတ်တိုးပစ္စည်း,၊အရောင်ချွတ်အေးဂျင့်နှင့်ပိုးသတ်ဆေး တို့တွင် အသုံးပြုကြသည်။ ပြင်းသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုက် သို့မဟုတ် "စမ်းသပ်မှုမြင့်သော ပါအောက်ဆိုက်" သည် ဓာတ်ပြုနိုင်သောအောက်စီဂျင်မျိုးစိတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဒုံးပျံလွှတ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာတွင် လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းဓာတုဗေဒ၏ သဘောသဘာဝသည် မတည်မငြိမ်သော ပါအောက်ဆိုဒ်အနှောင်အဖွဲ့အစုအဝေးက လွှမ်းမိုးသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်သည် အရိုးရှင်းဆုံ းပါအောက်ဆိုဒ်ဖြစ်သည်အောက် ...
အာဒစ် အာဘာဘာမြို့သည် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ဖြစ်သည်။ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် လူဦးရေ စာရင်း အရ လူဦးရေ ၃,၃၈၄,၅၆၉ ဦး ရှိသည်။ အာဖရိက သမဂ္ဂ နှင့် ၎င်းမတိုင်ခင်က ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အာဖရိက ညီညွတ်ရေး အစည်းအရုံးတို့သည် အာဒစ် အာဘာဘာတွင် ရုံးထိုင်ကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂ အာဖရိက စီးပွားရေး ကော်မရှင်သည် အာဒစ် အာဘာဘာမြို့တွင် ရုံးထိုင်ကြပြီး အာဖရိက တိုက်နှင့် သက်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်း အများအပြားနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း အများအပြားတို့ ရုံးထိုင်ကြသည်။ အာဒစ် အာဘာဘာမြို့သည် သမိုင်းကြောင်း အားဖြင့်သော် လည်းကောင်း၊ သံတမန်ရေးရာ အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး အားဖြင့်သော်လ ...
ရေမွှေး ကို ရှေးပဝေဏီကပင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။သို့သော် ထိုစဉ်က မွှေးကြိုင် သောအရွက်၊ အခေါက်နှင့်သစ်သားတို့ကိုသာ မီးထွန်း၍ ဘုရား ကျောင်းများတွင် ပူဇော်သက္ကာရ ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့မီးထွန်း၍ ပူဇော်သည့်အခါတွင် မီးခိုးများထွက်သဖြင့် ပန်းနံ့သာ အခေါက် အရွက်တို့မှ မွှေးကြိုင်သောအရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန် ကြံဆ ခဲ့ကြလေသည်။ ရှေးနှစ်ပေါင်း ၅ဝဝဝ ခန့်ကပင် အီဂျစ်နိုင်ငံ၌ ရေမွှေး အသုံးပြုခဲ့သည့် အထောက်အထားများကို ယင်းတို့၏ ဘုရင်မ သင်းချိုင်းကို တူးဖော်ရာမှ အမွှေးနံ့သာခဲများကို အမွှေးထည့် သည့်ခွက်များတွင် ထည့်ထားသည်ကို တွေ့ရခြင်းဖြင့် သိနိုင် ပေသည်။ ထိုပြင် ရှေးအီဂျစ်လူ ...
ဇဝက်သာကို ဓာတုသင်္ကေတ အဖြစ်ဖြင့် NH4Cl ဟု ရေး၏။ ဇဝက်သာသည် အဖြူရောင် ခရစ္စတယ်ဒြပ်ပေါင်းဖြစ် သည်။ ယင်း၌ နိုက်ထရိုဂျင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ ကလိုရင်းတို့ပါ ရှိသည်။ ဓာတုဗေဒအလိုအားဖြင့်၊ ဇဝက်သာကို အမ်မိုးနီးယမ်း ကလိုရိုက်ဟု ခေါ်သည်။ ဇဝက်သာသည် ရေထဲ၌ ကောင်းစွာ ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ရေတွင် စူးရှသောအနံ့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် ပြင်၊ ဆားကဲ့သို့လည်း ငန်စေနိုင်သည်။ ရိုးရိုးကျောက်မီးသွေးမှ ကုတ်မီးသွေးနှင့် ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့တို့ကို ထုတ်ယူသော အခါ၊ အမ်မိုးနီးယားရေသည် ဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ် ထွက်လာ သည်။ ထိုအမ်မိုးနီးယားရေကို ဟိုက်ဒရိုကလောရစ် အက်ဆစ် နှင့် ပေါင်းစပ်စေလျှင် အမ်မိုးနီးယမ်းကလိုရိုက်ဖြစ်သည်။ ထို ဒြဗ်ပေါင်းကိ ...
အစားအသောက်များကို ကြာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်နည်း တစ်နည်းမှာ စည်သွတ်၍ထား နည်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းမှာ အအေးဓာတ်ပေး၍ ကြာရှည်ခံအောင်ထားနည်းထက် ရှေးကျ လေသည်။ အစားအသောက်များကို စည်သွတ်ထားပြီးသောအခါ နောက်ထပ် အထူး ဂရုစိုက်ပြုပြင်ပေးရန် မလိုတော့ချေ။ စည်သွတ်ထား ခြင်းဖြင့် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ကြည်ရှည်စွာထား၍ သုံးနိုင် သည့်ပြင် သယ်ယူရာ၌လည်း လွယ်ကူလှပေသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၅ဝ ခန့်က ပြင်သစ်လူမျိုး စား တော်ချက်တစ်ဦးဖြစ်သူ နစ်ကလတ် အက်ပတ် ဆိုသူသည် အစားအသောက်များကို ပူအောင်ချက်ပြီးလျှင် ပုလင်းတွင် ထည့်၍ လေလုံအောင်ပိတ်ထားပါက အချိန်ကြာမြင့်စွာခံ ကြောင်းကို မကြံဆဘဲနှင့် ကံအားလျော်စွာ တွေ့ရှိခဲ့လေသည်။ ထိုအခါမှစ၍ ...
စက်ယန္တရားများသည် ဓာတ်ဆီ ရေနံဆီတို့ရှိမှ ပူနွေးလာ ၍ လှုပ်ရှားနိုင်ကြသည်။ ထိုနည်းအတူ လူကိုယ်ခန္ဓာစက်ကြီး သည်လည်း ဆီနှင့်အဆီခဲတို့ရှိမှ ပူနွေးလာ၍ လှုပ်ရှားနိုင်ကြ သည်။ ဆီနှင့် အဆီခဲတို့မှာ ကာဗိုဟိုက် ဒရိတ်ဓာတ်ထက်ပိုမို၍ ခန္ဓာကိုယ်အာ အပူဓာတ်ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ယင်းတို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာ သွားလာလှုပ်ရှားမှုအတွက် အင် အားကို ရရှိစေရန်သာ အသုံးဝင်သည်မဟုတ်ချေ။ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၌လည်း များစွာအသုံးဝင်လေသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံများမှ ထုတ်ယူရရှိသော ဆီနှင့် ကျွဲနွား၊ ဝက်၊ ဆိတ်စသည့် တိရစ္ဆာန်များမှ ရရှိသော အဆီခဲများမှာ ဓာတုဗေဒနည်းအရ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ကြည့်ရှုလျှင်၊ ယင်းတို့၌ပါဝင်သော ဓာတ်သတ္တိမျာ ...
လေမဲ့မောင်းနှင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ နူကလီးယားစွမ်းအင်းသုံး မဟုတ်သော ရေငုပ်သင်္ဘောကို လေထုအောက်စီဂျင်အသုံးမပြုဘဲ မောင်းနှင်သော ရေကြောင်းနည်းပညာ ဖြစ်သည်။ AIP သည် နျူကလီးယားမဟုတ်သော ရေငုပ်သင်္ဘောများ၏ ဒီဇယ်-လျှပ်စစ် မောင်းနှင်မှုစနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးနိုင်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ် နျူကလီးယားမဟုတ်သော ရေငုပ်သင်္ဘောများသည် နျူကလီးယား ရေငုပ်သင်္ဘောများထက် ပို၍ တိတ်ဆိတ်သည်။ နျူကလီးယားသင်္ဘော၏ အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုသည် အအေးခံရည်များ အမြဲလည်ပတ်နေရသောကြောင့် ရှာဖွေထောက်လှမ်းနိုင်သော ဆူညံသံ ထွက်ပေါ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ဘက်ထရီစွမ်းအင် သို့မဟုတ် AIP ဖြင့်လည်ပတ်နေသည့် နျူကလီးယားမဟုတ်သော ရေငုပ်သ ...
ဓာတုဗေဒ ပညာရပ်သည် ဒြပ်ဝတ္တုတို့၏ ပါဝင်ပေါင်းစပ်ပုံ၊ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ဂုဏ်သတ္တိ များနှင့်အတူ ဓာတု ဓာတ်ပြုခြင်း ဖြစ်သောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို လေ့လာသော သိပ္ပံဘာသာရပ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဓာတုဗေဒသည် ရုပ်ဝတ္တု သိပ္ပံဘာသာရပ် ဖြစ်ပြီး အက်တမ်၊ မော်လီကျူး၊ ပုံဆောင်ခဲ နှင့် အခြား စုပေါင်းထားသော ဒြပ်ပေါင်း၊ ဒြပ်နှော များတွင် ဓာတုဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ပတ်သက်သော စွမ်းအင်နှင့် အင်ထရိုပီ သဘောတရားများကို လေ့လာသည်။ ခေတ်သစ်ဓာတုဗေဒသည် ဗိန္ဓောပညာရပ်မှ ဓာတုတော်လှန်ရေးဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသည်။
ဓာတုဒြပ်ပေါင်းနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်များကို ခွဲခြားစိတ်ဖြာလေ့လာသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဓာတုဗေဒ analytical chemistry ဘာသာရပ်ခွဲများ တို့ဖြစ်သည်။
ဩဂဲနစ် ဓာတုဗေဒ organic Chemistry
သက်ရှိများတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ဇီဝဖြစ်စဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဇီဝဓာတုဗေဒ biochemistry၊
ဩဂဲနစ် မဟုတ်သော ဓာတ်များကို လေ့လာသော အင်ဩဂဲနစ် ဓာတုဗေဒ Inorganic Chemistry
များလာသောအခါတွင် at macro level သို့မဟုတ်၊ မော်လီကျူလာနှင့် မော်လီကျူလာ ထက်သေးငယ်သော အခြေများတို့ရှိ ဓာတုစနစ် chemical system ရှိ စွမ်းအင် ကိုလေ့လာသော ရူပဓာတုဗေဒ physical chemistry နှင့်
ပိုမို၍ အဏုစိတ် ဘာသာရပ်ကွဲများဖြစ်သည့် ဦးနှောက် ကွန်ယက်များကို လေ့လာသော နျူရိုဓာတုဗေဒ neurochemistry များလည်း ယခုနှစ်ပိုင်းများတွင် ပေါ်ထွန်းလာလျှက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနေကြဖြစ်သော အရာဝတ္တု ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် သဘောသဘာဝများမှာ ၎င်းဒြပ်ဝတ္တု၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ၎င်းတို့ အပြန်အလှန် ဒြပ်သက်ရောက်မှု များပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ သံမဏိ သည် သံထက်မာကြောသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သံမဏိ၏ အက်တမ်များသည် ပိုမို၍ခိုင်မာသော ပုံဆောင်ခဲအကွက် crystalline lattice များဖြင့် တွယ်ဆက်ထား၍ဖြစ်သည်။ သစ်သားစများသည် မီးလောင်သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် တစ်စုံတစ်ခုသော အပူချိန် အထက်တွင် အောက်စီဂျင် နှင့် အလိုအလျောက် ဓာတ်ပြုပြီး ဓာတ်လျော့ oxidation သွားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆား နှင့် သကြား တို့မှာ ရေတွင် ပျော်ဝင်သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့၏ မော်လီကျူး သတ္တိတို့မှာ သာမန် အခြေတွင် ပျော်ဝင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးအခြေကို ရောက်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပြုခြင်းတွင် အရာဝတ္တုများသည် တစ်မျိုးမှ တစ်မျိုးသို့ ပြောင်းလဲသည်။ ၎င်းကို ဓာတုညီမျှခြင်းများသုံး၍ သင်္ကေတများဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။ ညီမျှခြင်း ဘယ်ဖက်နှင့် ညာဖက်ရှိ အက်တမ် အလုံးရေမှာ အမြဲလိုလို တူညီကြသည်။ ဓာတ်ပြုခြင်း၏ သဘောသဘာဝမှာ အရာဝတ္တုများ ထိုသို့ပြောင်းလဲကြရာတွင် မလွဲမသွေ လိုက်နာကြမည့် အချင်းအရာများရှိပြီး ၎င်းတို့ကို ဓာတုနိယာမဟု ခေါ်ဆိုသည်။
ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ကို အဆင့်မြင့် အခြေခံပညာနှင့် ကောလိပ်အစပိုင်းနှစ်များတွင် အဓိက ဘာသာအဖြစ် ပါရှိသည်။ ၎င်းလေ့လာမှု့များမှာ များမြှောင်လှစွာသော အခြေခံများကို စတင်ပေးသော ယေဘုယျ ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှသည် လေ့လာသူ အနေဖြင့် အဆင့်မြင့် ဓာတု လမ်းခွဲများကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်သည်။ ဓာတုသုတေသနတွင် လုပ်နေသော သိပ္ပံပညာရှင်ကို ဓာတုပညာရှင် chemist ဟုခေါ်သည်။ အများအားဖြင့် ဓာတုပညာရှင်မှာ ဓာတုဘာသာရပ်ခွဲ တစ်ခုကိုသာ အထူးပြု လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသည်။
2. မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဓာတုဗေဒ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓာတုဗေဒ ဓာတ်ဆေး Chemicals များကို ပုဂံခေတ် ကတည်းကစ၍ သုံးစွဲတတ်သည့် အလေ့အထ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကျောက်စာ အထောက်အထားအရ သိရပါသည်။ ပုဂံမြို့ဟောင်း စောလှဝန်းဘုရားအနီး အမတ် အသဝတ် ဓမ္မာမယား ကျောက်စာတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျမ်းကိုး ကျမ်းကားနဲ့ စပြီး တွေ့ရတာကတော့ ၁၇၅၉ ခုနစ်က သင်္ဘောဆေးစာ အမည်ရှိတဲ့ ပေစာမူအရ သိရသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်အစ အလောင်းမင်းတရား လက်ထက်မှာ ရေးမှတ်ထားခဲ့တဲ့ သင်္ဘောဆေးစာ ဆိုတဲ့ ပေမူဟာ ဓာတုဗေဒကျမ်း တစ်ဆူပါပဲ။ အထဲမှာ ပါတဲ့ စာသားတချို့အရ အဲဒီကျမ်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အဲဒီအချိန်က အဆက်အသွယ် ရှိနေတဲ့ ပေါ်တူဂီတွေ ဆီကနေ ကူးယူထားတယ်လို့ သိရသည်။ မူရင်းကျမ်းမှာ ထုတ်လုပ်နည်းပေါင်း ၁၀ဝ ကျော် ဖော်ပြထားသည်။ အဲဒါတွေကို မျိုးတူမျိုးတူ အစုပဲ ဒီအတိုင်း အဆင်ပြေသလို ပြထားတော့ အားလုံးဟာ ပြန့်လျားကြီး ဖြစ်နေသည်။ ဒါကို တူရာတူရာ စုစည်းပြီး အုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရင် အုပ်စု ၃၀ ရလာသည်။ အဲဒါကို အကျဉ်းချုပ်မျှ ဖော်ပြချင်ပါသည်။
ဖန်ချက်နည်း ၁၁ နည်း။
တဏှာကျွဆေး ဖော်နည်း ၂ နည်း။
သစ်သား အရောင်တင်ဆီ လုပ်နည်း ၃ နည်း။
သစ်ပင်ဆား Potassium Carbonate ထုတ်လုပ်နည်း။
သင်္ဘောဆေးနှင့် ငွေမင်လုပ်နည်း ၃ နည်း။
ရွှေလုပ်ငန်း - ရွှေရေး ရွှေချနည်း၊ သံပေါ် ရွှေရေးနည်း၊ ရွှေချနည်း ၂ နည်း၊ ရွှေပင် ငွေပင် စိုက်နည်း ၄ နည်း၊ ရွှေမှုန့် စားဆေးဖော်နည်း ၂ နည်း၊ သံ ရွှေရောင်တင်နည်း၊ ရွှေရောင်ရေးနည်း ၂ နည်း ရွှေ အတုချက်နည်း။
ဒုတ္ထာ ဆီချက်နည်း ၃ နည်း။
သံဂုဏ်ဂမ္မံ အားဆေးဖော်နည်း ၂ နည်း။
ကြေးနီလုပ်ငန်း - ကြေးနီဖြူနည်း ၂ နည်း၊ ကြေးဝါ ကြေးနီ ဖော်နည်း၊ သံကြေးနီလုပ်နည်း။
မီးစုံး Phosphorus ချက်နည်း ၂ နည်း။
လောင်မီး ဖော်နည်း ၃ နည်း။
ချည် အဝတ်ဆိုးဆေး လုပ်နည်း ၆ နည်း။ ချုပ်ဆေး ဖော်နည်း။
မိန်လာ မျိုးစုံ လုပ်နည်း ၁၂ နည်း။
ရေပြင်း Acid လုပ်နည်း ၅ နည်း။
သတ္ထု အရည်ပျော် အကူပစ္စည်း Flux လုပ်နည်း ၅ နည်း။
အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ နည်းတွေကို အခြေခံ ဓာတုကုန်ထုတ် ပညာနည်းစဉ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ကျိုချက်ခြင်း၊ အငွေ့ပြန်ခြင်း Evaporation ၊ ပေါင်းခံခြင်း Distillation ၊ မီးဖြင့်လှော်ခြင်း၊ ပြုတ်ခြင်း၊ အပူတိုက်ခြင်း၊ မီးအုံးခြင်း၊ မီးကင်ခြင်း၊ မီးဖုတ်ခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊ အမှုန့်ကြိတ်ခြင်း၊ စကာချခြင်း၊ မွှေခြင်း၊ နှဲခြင်း၊ အရည်စိမ်ခြင်း၊ အရည်ဖျော်ခြင်း၊ အနည်ထိုင် အကြည်ခံခြင်း၊ အရည်စစ်ခြင်း၊ ဓာတ်စွဲကပ်ခြင်း Absorption၊ အဆီထုတ်ခြင်း Oil Extraction စတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ဆောင်ရွက်တယ်။ အပူပေးတဲ့နေရာမှာ ထင်းမီး၊ မီးသွေးမီးကို သုံးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တိုက်ရိုက် အပူပေးပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ရေ၊ သဲ၊ ဖွဲ၊ နွားချေး၊ မြင်းချေးတွေနဲ့ ကြားခံထားပြီး အပူပေးလို့ မီးအရှိန်ကို လိုသလို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အဲဒီလို ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးတဲ့ ကိရိယာတွေ၊ ကုန်ကြမ်းတွေ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ သစ်ပင်ထွက် ပစ္စည်းများ နဲ့ လူ တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ ပစ္စည်းများ ကို ကြည့်ပြီး အဲဒီခေတ်က သိပ္ပံပညာ အဆင့်အတန်းကို လေ့လာနိုင်သည်။
2.1. မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဓာတုဗေဒ ထုတ်လုပ်မှု ကိရိယာများ
အငွေ့ပျံ ပေါင်းခံရန် လံဘိကာပ Alembic ပေါင်းချောင်၊ စဉ့်သုတ်အိုးကောက်၊ ခံအိုး Condenser Receiver၊ ဖန်ခံအိုး၊ ခဲမဖြူ ပွတ်ခံအိုး၊ အလိုက်ကလိုက်။
2.2. မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဓာတုဗေဒ ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းများ
ရေပြင်း၊ ငရဲမီး Acid ၊ ပုံးရည်ပြင်း၊ သုံးခါပြန် ပုံးရည်၊ ထန်းရည်ပုံးရည် Acetic Acid ၊ အသစ်ညှစ် သံပုရာရည် Citirc Acid ၊ အိန္ဒနံပုံးရည် Lead monoxide ၊ အာဂေါ်ရေဆီ၊ ရေဘုရင် တော်ဝင် အက်ဆစ်၊ Aqua regia ၊ ကက္ကူကမည်း Benzonic Acid ၊ ပြဒါး၊ ဟင်္သပဒါး၊ အမာလာဂမာ Amalgam ၊ ရွှေဆိုင်း၊ စိန်ဖြူ Arsenic ၊ ဆေးဒန်း၊ ကန့်၊ ခဲမ၊ ခဲမပုတ်၊ ခဲပြာ၊ ခဲမပြာ၊ ခဲမနက် Graphite ၊ ဝှော်ဆဝရော၊ လောင်မီး Phosphorus ၊ ခဲမဖြူ ဘင်၊ သလွဲဖြူ၊ Pewter ၊ ခနောက်စိမ်း Antimony ၊ ဘော် Silver ၊ ရွက်နီဘော်၊ ဂျွတ် Bismuth ၊ မီးသွေး၊ ကျပ်ခိုး၊ သံ၊ သံမှုန့်၊ သံတစဉ်းစာ၊ သံပြာ၊ သံမဏိပြာ၊ သံဂုံဂမံ Ferric oxide ၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ဒုတ္ထာ၊ ဒုတ္ထာဆီ၊ ဒုတ္ထာရည် Blue vitorial, Copper sulphate ၊ ယမ်း၊ ယမ်းပြန်ပြီး၊ ယမ်းစိမ်း၊ တာတရု၊ တာတဂူ၊ တာတလူ ၊ ဇဝက်သာ Salammoniac, Ammonia chloride ၊ လက်ချား Borax, Sodium Pyroborate ၊ သစ်ရွက်ပြာ၊ စဖိုပြာ Potassium carbonate ၊ မဖောက်ထုံး၊ မြေဖြူ၊ အာရုဒါ၊ အာရုဝါ အရက်ဆား၊ ကျောက်ချဉ်၊ ဆား Sodium chloride ၊ သဲ၊ အုတ်မှုန့်၊ အုတ်နီခဲ၊ မြေအိုးမှုန့်၊ အရက်နီ၊ ဘရံအရက် Brandy ၊ အရက် Alcohol ၊ သင်းတွဲစိမ်းမှုန့်၊ သန္ဓောဆား၊ တရေမင်တီနာဆီ၊ ရောဘာရဘူ ထင်းရှူးဆီ၊ အိန္ဒနံကျောက်၊ နှင်းရည်၊ ပရုပ်၊ ရေနံဆီ၊ ကတ္တရာဆီ၊ မြေဖယောင်း၊ နိပဆေး၊ သေနတ်ကျောက်၊ အင်ကြင်းကျောက်၊ သံလိုက်ကျောက်၊ ကျောက်သလင်း၊ ကျောက်စစ်။
2.3. မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဓာတုဗေဒ အပင်ထွက် ပစ္စည်းများ
ဖုံးမသိမ်ရွက်၊ သမင်စမ၊ သမင်စဖို၊ ငှက်ပျော၊ လိပ်စရွေ၊ မဲကြီးရွက်၊ ထနောင်းကြူ၊ သက်ကယ်၊ အမှော်နရကူစေ့၊ ရှားပေါက်စေ့၊ သရက်ပွင့်၊ သရက်စေ့၊ အုတ်ရှစ်စေ့၊ အုတ်ရှစ်ဆီ၊ ပေါင်ပဲစေ့ မာလတိ ၊ ပေါင်ပဲ့ဆီ၊ ပိုက်ဆံစေ့၊ ပိုက်ဆံဆီ၊ ချဉ်သီးစေ့၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ဖာလာ၊ ဇီယာ၊ စမုံမျိုးငါးပါး၊ ပဉ္စကနီသီး၊ ကညင်သီး၊ သပြေစေ့၊ သပြေသား၊ သပြေဆီ၊ ရုံးပတီသီး ပဉ္စငါးပါး၊ ကျစုသီး၊ လင်းနေဆီ၊ သင်းတွဲကညင်ဆီ၊ အုန်းဆီ၊ ရှားဆေးအဆီ၊ ဘိန်း၊ သစ်ကျပိုး၊ တောရပ်ခေါက်၊ ဇာတိပ္ဖိုလ်ပွင့်၊ လေးညှင်းပွင့်၊ သစ္စေး၊ ချိပ်၊ ရှိန်းခို၊ ကနခို၊ ကြောင်ပန်း၊ မုတ်၊ ရှောက်ခွံ၊ ချင်းခြောက်၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ပိန္နဲနွယ်၊ နနွင်းတက်၊ ထန်းနို့၊ မဲနယ်၊ သကြားပွင့်၊ ဂျုံမှုန့်၊ တိန်းညက်၊ ထန်းလျက်။
2.4. မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဓာတုဗေဒ လူတိရစ္ဆာန်တို့၏ ပစ္စည်းများ
လူ့အံဘတ်၊ လူ့ကျင်ကြီး၊ လူ့ကျင်ငယ် Urine phosphate ၊ မြင်းချေး၊ နွားချေး၊ ထောပတ်၊ ဝက်ဆီ၊ ဆိတ်ဆီ၊ နွားဆီ၊ ကျွဲဆီ၊ ခွေးဆီ၊ ဝမ်းဘဲဆီ၊ ကင်းပုစွန်ဆီ၊ ခွေးမနို့၊ ခွာအမျိုးမျိုး၊ သမင်ဂျို၊ ဂျိုအမျိုးမျိုး၊ အမဲရိုး၊ အမွှေးအတောင် အမျိုးမျိုး၊ ကြက်ဥအကာ၊ ပရွက်ကောင်၊ ခါချဉ်ကောင်။ ကျမ်းကြီး တစ်စောင်လုံးမှာ အရေးအသားပိုင်း အံဩရလောက်အောင် တိကျမှုရှိသည်။ စနစ်ကျသည်။ ရေပြင်းချက်တဲ့ဖို တည်ဆောက်ပုံ ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ ဟာကွက် မရှိအောင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပုံက နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည်။ မီးပေးမီးယူ ထုတ်လုပ်မှု ထိန်းချုပ်ပုံ စနစ်ကလည်း အလွန် သိပ္ပံနည်း ကျလှသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ရာနဲ့ချီတဲ့ အချိန်ကတည်းက ပြုစုထားတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဓာတုဗေဒ ထုတ်လုပ်ရေးတစ်ရပ် ဖြစ်ပေမယ့် အခုခေတ် အဆင့်နဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ရင် ရေးသားပုံက ရေပက်မဝင်အောင် ရှိနေလို့ ဂုဏ်ယူစရာ သိပ်ကောင်းသည်။ ဓာတုဗေဒ ပညာရပ် ပိုင်းက သုံးသပ်ရင်လည်း ဓာတုပညာရပ်ကို စခဲ့တဲ့ ရှေးခေတ် အဂ္ဂိရတ် ဆရာကြီးတွေရဲ့ ယမ်းငရဲမီး၊ ကန့်ငရဲမီး၊ ဆားငရဲမီး နဲ့ ရွှေစား ငရဲမီး ထုတ်လုပ်ပုံ နည်းစနစ်တွေနဲ့ ပုံစံတူတာ တွေ့ရသည်။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေဟာ အဲဒီ အချိန်ကတည်းက မှန်ကန်တဲ့ ဓာတုဗေဒ ပညာ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ခြေချမိနေပြီ ဆိုတာ သိသာ ထင်ရှားပါသည်။ ဒါတွေကို ကြည့်ပြီး ရှေးခေတ် ဓာတုဗေဒ ပညာရပ်ဟာ ရွှေဖြစ် ငွေဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ဝိဇ္ဇာ ပညာရပ်ချည်း မဟုတ်ဘဲ သိပ္ပံပညာရပ်တွေလည်း ရှိသေးသည်ဆိုတာ မြင်သာထင်သာအောင် တင်ပြလိုက်ပါသည်။
3. အခြေခံ သဘောတရားများ
ဒြပ်စင်များကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြရန်မှာ atomic number အရ အုပ်စုခွဲထားသော periodic table ပင်ဖြစ်သည်။ periodic table သည် ညဏ်ကျယ်ကျယ်ဖြင့် စနစ်တကျစီစဉ်ထားသောကြောင့် ၎င်းဇယားတွင် အုပ်စု ဒေါင်လိုက် နှင့် နရီ period အလျားလိုက် ဒြပ်စင်၏ တူရာ ဂုဏ်သတ္တိအလိုက် စီစဉ်ထားသည်။